TLEE Spas na -ekpughere ọrụ ọhụụ: Willowbrook Spa na The Lake House na Canandaigua
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » TLEE Spas na -ekpughere ọrụ ọhụụ: Willowbrook Spa na The Lake House na Canandaigua
Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Willowbrook Spa na The Lake House na Canandaigua
TLEE Spas, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe spa zuru ụwa ọnụ nke nwere atụmatụ mara mma, usoro ile ọbịa, bụ ihe nsọpụrụ ikpughere Willowbrook Spa, nke arụpụtara n'oge na-adịbeghị anya na The Lake House na Canandaigua, ụlọ nkwari akụ na spa nke sitere n'ike mmụọ nsọ. Mpaghara ọdọ mmiri nke New York. Ọdịmma ahụike ọhụrụ na-enweta mmụọ nsọ site na ọnọdụ ọmarịcha ọdọ mmiri ya na ọmarịcha mara mma nke ọdọ mmiri Finger, nke ama ama maka akwụkwọ ozi kwesịrị ekwesị maka ọdọ mmiri na ugwu ndị na-agbagharị agbagharị na dị ka mpaghara ọrụ ugbo bara ọgaranya na akụkọ ntolite obodo.
Ọdịmma ahụike ọhụrụ na -eweghachi ma na -akpali mmụọ site na saunas na -efe efe na ọgwụgwọ ịhazi ya.
Ụlọ Lake enwetala nkwado na Condé Nast Traveler's Hot List 2021 dị ka nke kachasị ọhụrụ: ụlọ oriri na ọ inụ worldụ n'ụwa, ụlọ oriri na -adigide n'ụwa, ụlọ oriri na ọ USụ inụ na US na Canada, na ụlọ okike gburugburu ụwa.
Willowbrook Spa na -eme ka ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ nwee ohere ịnweta ogige mara mma, ọdọ mmiri dị jụụ na ọgwụgwọ.
Mgbe ụlọ Lake mepere n'oge ọkọchị gara aga, n'oge ọrịa COVID-19, ịlaghachi na njem mpaghara na njem nlegharị anya na-ebute nnukwu ihe maka ụlọ ahụ, ebe oghere ime ụlọ na nke mpụga na-abanye n'ime onwe ha wee mepụta ọnọdụ mara mma maka ncheta ndụ. Egosiputara na nso nso a na Travel + Leisure's It List 2021, nhọrọ nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ newụ kacha mma kacha ọhụrụ n'ụwa, The Lake House nwetakwara aha na Condé Nast Traveler's Hot List 2021 dị ka n'etiti ụlọ oriri ọhụrụ kachasị mma n'ụwa, nke kachasị ọhụrụ. adigide ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ n'ụwa, ụlọ oriri na ọ hotelsụ newụ kacha ọhụrụ kacha mma na United States na Canada, yana ụlọ nkwari akụ kacha ọhụrụ kacha mma gburugburu ụwa. Willowbrook Spa na -ekesa ọmarịcha eke eke mara mma nke ụlọ nkwari akụ ahụ na ịnweta ubi mara mma na ọdọ mmiri dị jụụ, yana ọgwụgwọ ahaziri maka ebumnuche ọdịmma ndị ọbịa.
Lee kwuru, "Willowbrook Spa na -alaghachi azụ na ịdị adị nke njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nwayọ nke ndụ ya na ahụmịhe n'èzí." "Anyị na-eji nkà ihe ọmụma ime obodo na njikọ ụwa anyị na-eme ihe site na imepụta spa ahụ, ngwaahịa dị mma dị mma yana ọrụ ndị na-arụpụta nsonaazụ."
Ngwakọta nke mmetụta - gụnyere ndụ obodo mmanya na nka nri nri - Willowbrook Spa bụ ebe ebumpụta ụwa nke ịdị mma n'ụdị dị iche iche, site na mmegharị echiche n'etiti gburugburu dị jụụ ruo ọgwụgwọ n'èzí na nlọghachi izu ụka. Dịka mpaghara mpaghara Finger Lakes, a makwaara dị ka mpaghara mmanya kacha dị na East Coast nke United States, TLEE Spas lere anya na mpaghara ọ maara nke ọma, obodo mmanya California, yana mgbakwunye ihe ndị nyere aka kọwaa ụdị ndụ ahụ pụrụ iche n'ime ahụmịhe spa ọhụrụ. Ime ụlọ a bụ ebe ezumike nke na-egosipụta oke ọkụ ọkụ, ikuku ikuku ọhụrụ, na echiche na-akpali akpali na Spa Garden, nke gụnyere pods sauna ọdọ mmiri nkeonwe nwere mmiri ịsa ahụ na ebe izu ike nke na-etolite onwe ya nke nwere fresco dị iche. maka ndị mmadụ n'otu n'otu, di na nwunye ma ọ bụ obere otu. N'ime odida obodo gbara gburugburu, ọtụtụ nhọrọ ịnọdụ ọdụ na -agbatị ahụmịhe ezumike n'ime nnukwu ọpụpụ, na -enye ọnọdụ mmụọ nsọ maka ịtụgharị uche ma ọ bụ ọgbakọ mmekọrịta dị mma.
N'ịbụ onye ihe nketa ọrụ ugbo bara ụba nke mpaghara ahụ, nke butere mmụba nke ọrụ ugbo nke ihe nri nri ụwa na ịmaliteghachi ọgwụgwọ ọgwụgwọ eke, Willowbrook Spa na-eji ọgwụ osisi iji kwalite ahụike zuru oke yana gụnyere onyinye ume ọhụrụ iji bulie ahụmịhe onye ọbịa. N'ịbụ nke dị mfe ma bụrụ nke echebara echiche, menu spa na-enye ahụmịhe dị iche iche, gụnyere ọgwụgwọ nlekọta akpụkpọ anụ nke nnọkọ na ịhịa aka n'ahụ nke ihe onwunwe na-enye ụzọ abụọ ịkọwapụta na mmanụ mkpị ahịhịa na usoro ọgwụgwọ iji mejuo ọgụgụ isi nke onye na -agwọ ọrịa. Site n'onyinye ọrụ dị iche iche na-amasịkwa ndị ọhụrụ na ndị na-anwụkwa anwụ, Willowbrook Spa na-akpọ ndị ọbịa oku ka ha bulie ndụ ndụ ha nke ọma site n'ịdịda ala, ịmalitegharị na ịkwanye mmiri n'ụsọ oké osimiri ọdọ mmiri Canandaigua n'oge ọkọchị na ọdịda a.
Na mgbakwunye na Willowbrook Spa, TLEE Spas mepụtara mmemme maka Seawater Spa na Gurney flagship Montauk Resort, nke a ga -emepe na ngwụcha 2021 na njedebe ọwụwa anyanwụ nke Long Island. TLEE Spas lekwasịrị anya n'ịkwado ụdị ịdị mma na naanị olulu mmiri mmiri nke ala ahụ na ọnọdụ ihu oke osimiri, ebe ihe na-agwọ ọrịa eke mmiri bara ụba na ikuku jupụtara na nnu na-ewere ọnọdụ etiti. Willowbrook Spa na The Lake House na The Seawater Spa na Gurney's Montauk ga -arụ ọrụ dị mkpa n'ịwelite ahụmịhe ahụike n'akụkụ ọdọ mmiri ha na nke oke osimiri, na -akpọ ndị ọbịa ka ha mee njikọ n'etiti okike n'ime gburugburu ọdịmma ọhụrụ nke ejiri njirimara saịtị ahụ pụrụ iche na ọnọdụ mpaghara. .
Banyere TLEE Spas
TLEE Spas na -eweta oke agụụ na -enweghị atụ, ọkachamara na ime mgbanwe maka okike spas na ahụmịhe ahụike. Ha na-eji anya ọhụrụ abịarute ọrụ ọ bụla, na-achọ ụzọ ha ga-esi bulie ụlọ elu ahụ ma kewapụ ya, yana ndekọ ndekọ egosipụtara nke ọma site na nchịkọta ọrụ mmeri, ndị ahịa nwere nghọta na ụdị ndị isi. Maka ozi ndị ọzọ gbasara TLEE Spas, gaa www.tleespas.com .